Showing १५१-१६० of ६५२ items.
पुजाको नाम आउँदा सुस्माले भनिन् “छ्या छ्या!! भयो कुरै नगराउँ”
विभिन्न हतकाण्ड अपनाउँदै लाईमलाईटमा छाउँने गरेकी नायिका सुस्मा कार्की आफु चर्चामा नै आउँनको लागि कुनै कसर बाँकी राख्दिनन् । पर्दामा सेक्सी र ग्लामरस छबी पस्कनको लागि जस्तो पनि चलचित्रमा काम गर्दे आफनो करियरलाई धरापमा पारेकी सुस्मा यतिबेला फाट्टफुट्ट चलचित्रहरुमा देखिने गरेकीछिन् । फिल्ममा भन्दा बिदेशको स्टेज कार्यक्रममा व्यस्त हुने सुस्माले हालै रमाईलो छ युट्युव च्यानललाई दिएको अन्तरवार्तामा नायिका पुजा शर्माको अपमान गरेकीछिन् । प्रस्तोताले धेरै कलाकारहरुको नाम भन्दै जाँदा पुजाको नाम लिँदा सुस्माले “छ्या छ्या !! भयो कुरै नगराउँ” भन्ने जवाफ दिएकी थिईन् । त्यतीमात्र होईन उनले साम्राज्ञी , पल ज
प्रकाशित मितिः फाल्गुन ८, २०७४
प्रेमिकासँग थुरथुर हुने नाम मात्रका टाइगर !
बलिउड कलाकार टाइगर श्राफ र दिशा पटानी बीचको अफेयर त बच्चाहरुलाई पनि थाहा भइसक्यो । तर, आफ्नो ब्वाइफ्रेन्डलाई दिशाले कतिसम्म कन्ट्रोलमा राखेकी रहिछन् भन्ने थाहा पाएर तपाईं अचम्भित बन्नुहुनेछ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार दिशाले टाइगरका हरेक कुरामा निगरानी राख्छिन् । यतिसम्म कि उनी हरेक दिन टाइगरको फोन चेक गर्छिन् । उनले गर्ने फोन कल, म्यासेजको डिटेल हेर्छिन् । टाइगरले अरु कुनै अभिनेत्रीसँग टच गरेर बोलेको उनलाई मन पर्दैन । यही विषयमा उनीहरुबीच बारम्बार ठाकठुक पर्ने गरेको बताइन्छ । यति मात्र होइन, टाइगरले कुनै युवतीको फोटोमा लाइक गरे वा प्रशंसायुक्त कमेन्ट गरे भने पनि उनी सहन्नन् रे । टाइगर
नायिका निशा अधिकारी अामा बन्दै
नायिका निशा अधिकारी आमा बन्ने भएकी छन् । उनले हालै सामाजिक सञ्जालबाट सो जानकारी दिएकी हुन् । नायिका निशा अधिकारीले क्रिकेटर शरद भेषवाकरसँग विवाह गरेकी हुन् । भेषवाकर नामिबियामा भएको एसीसी डिभिजन–२ क्रिकेट प्रतियोगिता खेलेर सोझै श्रीमती निशा अधिकारीलाई भेट्न अमेरिका पुगेका छन् । उनी विश्वकप छनौट खेल्न उतैबाट जाने बुझिएको छ ।
प्रकाशित मितिः फाल्गुन ७, २०७४
बाघ निर्माता भनिने छविराज ओझा र अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलको प्रेमको खबरले गएको बर्ष जसरी नै यस बर्ष पनि फिल्म क्षेत्र तरंगीत बनेको छ । जति बेला फिल्म रिलिजको मुखमा हुन्छ तब यी दुईको प्रेम र बिवाहको खबर चर्चाको विषय बन्ने गर्छ । हुनत, धेरै पटक यो कपलले मिडियामा नै चाँडै बिहे गर्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । केही महिना अगाडि शिल्पाले छविराज ओझासँग यसै वर्ष बिवाह गर्ने बताएकी थिइन् । छविराज पनि शिल्पाको परिवारसँग औपचारिक कुराकानी भइसकेको र अब बिहेको मिति मात्र 'फिक्स' गर्न बाँकी रहेको बताउँदै हिँडेका छन् । यस्तैमा यतिबेला यी दुईको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको गाइँगुइँ चर्चा चल्न थालेको छ । फागुन २५
यस्तो थियो सलमान खान र ऐश्वर्याको प्रेम कहानी
बलिउडमा लव अफेयरको विषयमा थुप्रै चर्चा-परिचर्चा हुने गरेको छ । यस्तै, अधुरो प्रेम कहानीलाई लिएर पनि उत्तिकै चर्चा चल्ने गर्छ । अमिताभ–रेखा, सलमान खान–ऐश्वर्या राय र शाहिद कपुर–करिना कपुरको अधुरो प्रेम कहानीमा थुप्रै रहस्य लुकेका छन्। बलिउडको चर्चित अभिनेता सलमान र ऐश्वर्याको प्रेम–प्रसंगलाई लिएर थुप्रै अड्कलबाजी गर्ने गरिन्छ । उनीहरुको सम्बन्ध निकै रोमान्टिक मानिन्थ्यो, तर दुःखद अन्त्य हुन पुग्यो। सन् १९९७ मा मिस वर्ल्डको उपाधि जितेपछि ऐश्वर्याले बलिउडमा पाइला टेकेकी थिइन् । त्यतिबेला सलमान सोमी अलीको प्रेममा डुबेका थिए । उनी सोमी अलीसँग विवाह पनि गर्न चाहन्थे। तर, बलिउडमा ऐश्वर्याको प्रव
स्वेताको कमव्याक सार्थक बन्यो , ‘कान्छी’ जताततै हाउसफुल
नायिका स्वेता खड्काद्वारा निर्मित चलचित्र ‘कान्छी’ ले उल्लेखनियरुपमा दर्शकको साथ पाईरहेको छ । शुक्रबारबाट रिलिजमा आएको यो चलचित्र शनिबार जताततै हाउसफुल रहेको छ । शुक्रबार ८० प्रतिशतको अकुपेंन्सी पाएको ‘कान्छी’ ले शनिबार भने आक्रमक कलेक्सन गरेको छ । स्वेता खड्का र दयाहाङ राई स्टारर ‘कान्छी’ ले सिंगल स्क्रिन तथा मल्टिप्लेक्स दुबै हलहरुमा लगभग शतप्रतिशत अकुपेंन्सी पाएको हो । आज स्वेता , दयाहाङ र प्रज्जल सुजल गिरीसमेत हलमा पुगेर दर्शकसंगै बसेर चलचित्र हेरेका छन् । विल्कुलै पारिवारिक चलचित्र भएको कारणले पनि ‘कान्छी’ लाई दर्शकहरुले रुचाएका छन् । गोपीकृष्ण गोपी, ओम, नमः , शिवाय जय नेपाल, कुमारी, सिभ
प्रकाशित मितिः फाल्गुन ६, २०७४
डिस्काेमा यसरी उफ्रिइन् ऋषि धमलाकी पत्नि एलिजा (भिडियाे सहित)
चर्चित टेलिभिजन पत्रकार ऋषि धमलाकी पत्नी एलिजा गौतमको डेब्यु निर्माण रहेको फिल्म ‘अनुराग’को पहिलो गीत ‘कान्छा दाई गाना बजाई देउ’ सार्वजनिक भएको छ । दी कार्टुन क्रुजका सरोज अधिकारी र एलिजा गौतमले फिचरिङ गरेको गीतमा ताराप्रकाश लिम्बु र ममता गुरुङको स्वर छ । ममताकै शब्द रहेको गीतमा ताराप्रकाशकै संगीत छ । डिस्कोमा खिचिएको डान्सिङ नम्बरको यो गीतमा विक्रम स्वारको कोरियोग्राफी छ । गीतमा टेकेन्द्र शाहको सम्पादन छ भने फिल्म सम्पादन चाहिँ भूपेन्द्र अधिकारीले गरेका छन् । एरिका फिल्मसको व्यानरमा निर्माण भएको फिल्ममा एलिजा गौतम, समुन्द्र पण्डित, ठिलेंन लामा, सरोज खनाल, रुपा राना, राजाराम पौडेल, शिशिर रान
सलमानले बहिनी ज्वाँईलाई डेब्यु गराउँने पक्का
बलिउड नायक सलमान खान निर्माताको रुपमा पनि आईसकेका छन् । प्राय नव कलाकारहरुलाई डेब्यु गराउँन माहिर सलमानले आफनो बहिनी ज्वाईँ आयुस शर्मालाई डेब्यु गराउँने पक्का भएको छ । अडब्टे ट बहिनी अर्पिता खानसंग आयुष प्रेम बिवाह भएसंगै सलमानले आयुषलाई डेब्यु गराउँने चर्चा थियो । केही दिन अगाडीमात्र आयुषका लागि नायिका छनौट भएपछि उनले फिल्म ‘लभ रात्री’ को फस्टलुक सार्वजनिक गरेका हुन् । फिल्मकी डेब्यु नायिका वारिना हुसैन को छनौट भएपछि सलमानले बल्ल केटी भेटाए भनेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दा ठुलै हंगामा मच्चिएको थियो ।अभिराज मिनावालले निर्देशन गर्ने यो फिल्म लभस्टोरीमा बेश हुनेछ । आउदो सेप्टेम्बर २१ मा रिलि
कृ काे कमाइ ६ दिनमा साढे ५ कराेड
युवा स्टार अनमोल केसी र अदिती बुढाथोकी स्टारर चलचित्र ‘कृ’ ले आफनो ६ दिने कलेक्सन सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबारबाट रिलिजमा आएको कृ ले छैटौँ दिनसम्ममा ५ करोड ४४ लाख कलेक्सन गरेको निर्माण युनिटले बताएको छ । ऋाज एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दे ‘कृ’ को ६ दिने कलेक्सन सार्वजनिक गरेको हो । ‘कृ’ ले पहिलो दिन देशभरबाट कूल ९५ लाख ६५ हजार २ सय ४८ रुपैयाँ, दोस्रो दिन १ करोड ७७ लाख ६४ हजार ७ सय ६३ रुपैयाँ, तेस्रो दिन ६६ लाख ६८ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ कलेक्सन गरेको निर्माता सुवास गिरीले जानकारी दिए । इसुैगरी कृ ले चौथो दिन ५६ लाख १९ हजार ९ सय ९३ रुपैयाँ, पाँचौ दिन ८५ लाख ७९ हजार ५ सय ४५ रुपैयाँ र छैठौं दिन
प्रेम सम्बन्धमा रमाइरहेका चार चर्चित जोडी
जर्मनी चान्सलर ‘एडोल्फ हिटलर’ ले भनेका थिए, ‘युद्ध गरेपछि कि जितिन्छ कि हारिन्छ तर, प्रेम गरे न हार न त जीत ।’ वास्तवमा प्रेम त्यहीँ हो गर्नेले न हार्छ, न जित्छ । केवल गर्छन् प्राप्ति । आज हामीले प्रणय दिवसका दिन त्यही प्रेमकोबारे नेपाली कलाकारको प्रेमबारे चर्चा गर्ने जमर्को गरेका छौँ । कलाकारहरूको प्रेम सम्बधका विषयमा दिनहुँजसो गसिपहरु बनिरहेका हुन्छन् । हुन त कलाकारहरको प्रेम सम्बन्ध त्यति मजबुद देखिँदैन । वैवाहिक सम्बन्ध पनि त्यति मजबुद देखिँदैन । उल्लेखनीय रूपमा सम्बन्धबिच्छेद गरेका घटनाहरूबारे सर्बधारण समेत जानकार छन् । १, प्रियंका कार्की र आयुषमान देशराज जोशी व्यस्त अभिनेत्री प्रियं